▷ Black Friday pa iPad: ese mamodheru ari kutengeswa | IPhone nhau
Ignatius Room | 27/11/2021 08:00 | Yakagadziridzwa ku 27/11/2021 10:20 | iPad
Kana mukati memwedzi waGunyana usina kukwanisa kuvandudza yako yekare iPad, nekuti wakabuda mubhajeti panguva yezororo, Black Friday ndiyo nguva yakanakisa yegore yekuivandudza, kunyanya ikozvino kuti huwandu hwakakura kupfuura kare.
Gore rino iro Black Friday inotanga Mbudzi 26, kunyangwe kubva Muvhuro 22nd kusvika Muvhuro unotevera Mbudzi 29, tichawana zvinopihwa zvemarudzi ese, kwete chete kuvandudza iPad yako, asiwo kuvandudza yako iPhone, Mac, Apple Watch, AirPods ...
1 Ndeapi maPad modhi ari kutengeswa paBlack Friday
2 Sei zvakakosha kutenga iPad paBlack Friday?
3 Yakawanda sei iyo iPads inowanzodzika pasi paBlack Friday?
4 Yakareba sei Black Friday paPads?
5 Kupi kwekuwana madhiri ePad paBlack Friday
5.3 Dare reChirungu
Ndeapi maPad modhi ari kutengeswa paBlack Friday
TOP Black Friday inopa
Muna May wegore rimwe chetero, Apple yakavandudza iyo iPad Pro range, iyo Apple iPad ine zvimwe zvinhu pamusika uye iyo inotungamirwa neiyo processor yatinogona kuwana muMacBook Air, iyo M1.
Mwedzi mitanhatu yapfuura kubva pakuratidzwa kwayo uye kwemwedzi mishoma, takatokwanisa kuwana zvinonakidza zvinopihwa kune ese ari maviri 12,9-inch uye 11-inch modhi.
Zveshuwa kuti panguva yeBlack Friday hapana pamhando mbiri dzePad Pro uchapotsa bato remadhiresi.
Nerinopfuura gore nehafu pamusika, iyo iPad Pro 2020 ichiri sarudzo yakanaka kune vashandisi vasingakwanisi, kana vasingadi, kubhadhara chizvarwa chitsva chegore rino.
PaAmazon isu tinogona kuwana iPad Pro modhi kubva 2020, kunyanya iyo 11-inch modhi pamitengo inofadza zvikuru.
Kunyangwe iyo 2020 12,9-inch iPad Pro isina kuvepo kwakawanda, vatengesi vanozotora mukana weBlack Friday ku. bvisa stock iripo.
Nerinopfuura gore mumusika uye nedhizaini yakateedzerwa ku11-inch iPad Pro, isu tine iPad Air, piritsi iro gore rose rakagamuchira. zvinonakidza zvakaderedzwa, saka zvirokwazvo haungapotsa Black Friday.
Iyo yepfumbamwe-chizvarwa iPad yanga iri pamusika kweanopfuura mwedzi, saka usatarisire kuwana chero chinopihwa iPad kuisa. Tichafanirwa kumirira kwemwedzi mishoma inotevera kuti modhi iyi ideredze mutengo wayo.
2021 Apple iPad mini (kubva ...
Neiyo 2021 iPad mini iwe wakagamuchira iyo design update izvo vashandisi vazhinji vaive vakamirira nekuwedzera kwemutengo.
Iyi modhi, seyechipfumbamwe-chizvarwa iPad, yanga iri pamusika kweanopfuura mwedzi, saka unogona kukanganwa nezvako kuwana dhisikaundi panguva Black Friday.
Edza Zvinonzwika mazuva makumi matatu mahara
Mwedzi mitatu yeAmazon Music mahara
Edza Prime Vhidhiyo mazuva makumi matatu mahara
Sei zvakakosha kutenga iPad paBlack Friday?
Zvinoenda pasina kutaura kuti Black Friday ndiyo nguva yakanakisa yegore kwete kungotenga Kisimusi chete, asiwo kuvandudza chero mudziyo wemagetsi watiinawo kumba.
Makambani ese anowana mari zhinji yekutengesa muchikamu chekupedzisira chegoreNeBlack Friday iri rimwe remazuva akakosha, pamwe neKisimusi, kunyangwe iyi ndiyo nguva yakaipisisa yekutenga nekuda kwekuwedzera kwemitengo inowanikwa nezvigadzirwa zvese.
Yakawanda sei iyo iPads inowanzodzika pasi paBlack Friday?
Ose ari maviri 2021-inch iPad Pro 12,9, uye 11-inch modhi, tinogona kuwana mune zvimwe zvitoro zvine yakanyanya kuderedzwa ye10%, kunyange dzimwe nguva inongogara pa5%. Tichifunga nezvavanodhura, imari yakakosha.
Iyo 2020 iPad Pro modhi, mumavhezheni ayo maviri, kana isu tichiziva kutsvaga zvakanaka, tinogona kuwana anosvika mashoma. kuderedzwa kwe15-17%, kuva sarudzo dzinonakidza dzekufunga nezvadzo.
Nezve XNUMXth chizvarwa iPad uye iPad mini, zvese zvinongopfuura mwedzi pamusika, usatarisire kuwana zvidzikiso zvakakura kana zvidiki. Iyo yechisere-chizvarwa iPad ingangove yakaderedzwa pakati pe10-15%.
Iyo iPad Air, yakarova musika muna 2020, uye kwemwedzi yakati wandei, takaiwana paAmazon nayo discounts nezve 100 euros yeshanduro yekupinza. Neraki rombo rakanaka, yeBlack Friday iwe unogona kuiwana nemutengo mukuru.
Yakareba sei Black Friday paPads?
PaBlack Friday 2021, segore rega rega, inopembererwa zuva rinotevera Thanksgiving inopembererwa muUnited States. Zuva iri rinowira musi wa25 Mbudzi.
Kwapera zuva, the 26 of noviembre, ndipo pachatanga Black Friday zviri pamutemo, kubva na0:01 kusvika 23:59.
Nekudaro, kuitira kuti vakanyanya kuvhiringika vasarasikirwe zvinofadza zvinoderedzwa zvezuva rino, kubva Muvhuro, Mbudzi 22 kusvika Muvhuro unotevera, Mbudzi 29 (Cyber ​​​​Monday), tichatsvaga zvinopihwa zvemarudzi ese.
Kupi kwekuwana madhiri ePad paBlack Friday
Apple yave iripo kwemakore akati wandei kutamba yakapenga neblack friday, saka usatarisire kushanyira zvitoro zvavo kana webhusaiti yavo yepamhepo kuti uwane imwe mhando yekupihwa.
Kana iwe uchida kutora mukana wezuva rino uye kuchengetedza mari inogara ichiuya inobatsira kushandisa pane zvimwe zvinhu, unofanirwa kuvimba Amazon, Dare reChirungu, mediamarkt, K Tuin, Zvinoshamisa...
Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi veAmazon, chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvainogovera kuburikidza nezvitoro zvenyama uye zvepamhepo, asi pamitengo yakaderera muzviitiko zvakawanda.
Sezvo Apple iri kuseri kwekatalogi yese yezvigadzirwa zveApple zviripo paAmazon, isu tichanakidzwa vimbiso imwechete kuti tinogona kuva kana tikatenga zvakananga kubva kuApple.
Mumakore achangopfuura, Mediamarkt iri kubheja zvakanyanya pazvigadzirwa zveApple, kunyanya panguva yeBlack Friday, saka hatigone kumira kutarisa zvese zvinopihwa zvavanoburitsa.
Kungave kuburikidza newebhusaiti yayo kana nekushanyira imwe yenzvimbo dzakasiyana yainayo muSpain yese, El Corte Inglés ichave yakagadzirirawo. zvinonakidza discounts panguva Black Friday.
Chitoro cheK-Tuin chiri inoshanda chete muzvigadzirwa zveApple, chitoro chiripo mumaguta umo Apple isina kuvepo kwenyama.
NeBlack Friday vanopa zvakakosha kuderedzwa mune zvese zvavanogadzira, saka hazvimborwadza kuvashanyira mukati mezuva rino.
Magnificos yave iyo K-Tuin yeinternet mumakore achangopfuura, inonyanya kukoshesa zvigadzirwa uye zvishongedzo zveApple zvishandiso.
Gore rega rega neBlack Friday, vanopa zvinonakidza discounts uye promotional zvinopihwa kuti hatizogoni kupukunyuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » black Friday ipad